ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဤဆောင်းပါးကို ဝီကီစံနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်ရန် လိုအပ်နေသည်။ အကယ်၍သင်ပြင်ဆင်နိုင်ပါက ဤဆောင်းပါးအား တိုးတက်စေရန် ကျေးဇူးပြု၍ ပြင်ဆင်ပေးပါ။ ဆွေးနွေးချက်များ စာမျက်နှာတွင် အကြံပေးမှုများ ပါဝင်လိမ့်မည်။
This article may require cleanup to meet Wikipedia's quality standards. Please improve this article if you can. The talk page may contain suggestions.
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်။ မေလ ၂၇ ရက်နေ့တွင်ရွေးချယ်တင်မြောက်ခြင်းခံရသော ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် ယင်းကော်မတီ ဖွဲ့စည်းကြေညာခဲ့ပြီး စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော ကော်မတီ၏ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တရားဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ဖြစ်သော ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းရေး တာဝန်ကို နအဖမှ ၉ နှစ်ကျော်ကြာ ဆက်လက်ငြင်းဆန်လျက်ရှိသောကြောင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီကို သမိုင်းရေးရာ လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဖွဲ့ဝင် ၁၀ ဦးအနက် ၉ ဦးသည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ဖြစ်ပြီး ကျန်တစ်ဦးမှာ ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ မွန်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် နှင့် ဇိုမီးအမျိုးသားကွန်ဂရက် တို့ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ယင်းနိုင်ငံရေးပါတီ ၅ ခုသည် စုစုပေါင်းပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၄၈၅ နေရာအနက် ၄၃၃ နေရာ(၈၉)ရာခိုင်နှုန်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။
၁၉၉ဝပြည့်နှစ် ရေဩးကောက်ပွဲကို နဝတ=နအဖမှ(၃၁=၅=၈၉)နေ့စွဲဖြင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေအမှတ် (၁၄/၈၉) အရ ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်၊ (၁) ယင်းဥပဒေ၏နိဒါန်းတွင် လွတ်လပ်၍တရားမျှတသော ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကို ရွေးချယ်တင်မြောက်နိုင်ရန်ဟူ၍လည်းကောင်း။။ (၂) ဥပဒေ၏ အခန်း (၁) ပုဒ်မခွဲ (က) တွင် လွှတ်တော်ဆိုသည်မှာပြည်သူ့လွှတ်တော်ကို ဆိုလိုသည်၊ပုဒ်မခွဲ (ခ) တွင် ရွေးကောက်ပွဲဆိုသည်မှာ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုဆိုသည်။ပုဒ်မခွဲ (ဂ) တွင်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုသည်မှာ လွှတ်တော်သိုဏ္ဍရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသူကို ဆိုလိုသည်ဟူ လည်းကောင်း၊ (၃) ယင်းဥပဒေအခန်း (၁) တွင် လွှတ်တော်ကို မဲဆနနြယ်များအနက်မှ ဥပဒေနှင့်အညီ ရွေးကောက်တင်မြှောက်လိုက်သော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲဏ္ဍစည်းရမည်ဟူ လည်းကောင်း ဖော်ပြထားသည်၊ယင်းဥပဒေပြဌာန်းဖော်ပြမ+များအရ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲသည် တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်အတွက် မဟုတ်ပါ၊ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲရန်အတွက်လည်း မဟုတ်ပါ၊ ဥပဒေိံပအာ%ာ။ စီမံခန်ဏ္ဍခွဲမ+အာ%ာ။တရားစီရင်ရေးအာ%ာတိုဏ္ဍကို ပိုင်စိုးမည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဖွဲဏ္ဍစည်းရန်ပြုလုပ်မည့် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ေကြာင်း တရားဥပဒေအရထင်ရှားသည်၊ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပသည့်နေဏ္ဍရက်မှာပင် ထိုအချိန်က နဝတ ဥက့ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူး}ကီး စောမောင်အား“အကယ်ှု အတိုက်အခံများမှ အနိုင်ရမည်ဆိုပါက အာ%ာလွဲပြောင်းပေးပါ့မည်လား”ဟုမေးရာ ငါပေးထားတဲ့ကတိကိုစောင့်ထိမ်းပါမည်ဟု မဲရုံမှ မဲပေး_ပီးထွက်လာကာစတွင် ပြောကြားခဲ့သည်၊ လက်တွေဏ္ဍတွင်ကား နဝတ။ နအဖ တိုဏ္ဍသည် ‚င်းတိုဏ္ဍထုတ်ပြန်ထားသော ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို စကူ့စုတ်လုပ်လျက် ဥပဒေစိုးမိုးမ+ကို မျက်ကွယ်ိံပခဲ့သည်၊ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကိုချိုးဖောက်လျက် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်ဇူလိုင်လ (၂၇) ရက်နေဏ္ဍတွင် ေ-ကညာချက် (၁ှ၉၀) ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်၊ (၁ှ၉၀) . အနှစ်သာရမှာ ၁၉၉၀ ပြည့် နှစ် ရွေးကောက်ပွဲသည် ဥပဒေိံပမ+အာ%ာ။ စီမံခန်ဏ္ဍခွဲမ+အာ%ာ။ တရားစီရင်ရေးအာ%ာများကို ကျင့်သုံးနိုင်သောလ$တ်တော်ကိုဖွဲဏ္ဍစည်းရန်မဟုတ်။ ရွေးချယ်ခံရသော ကိုယ်စားလှယ်များသည် ဖွဲဏ္ဍစည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲရန်တာဝန်ရှိသည့် ပုဂြိုဟ်များအဖြစ် ဖွဲဏ္ဍစည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို သာရေးဆွဲရမည်၊ ယာယီဥပဒေရေးဆွဲှု အချုပ်အခြာ အာ%ာသုံးရပ်ကို ကျင့်သုံးပါက လက်မခံဘဲ အရေးယူမည်၊၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲပီးသည့်ကာလမှစှု အ}ကိမ်ပေါင်းများစွာ။ နည်းလမ်းပေါင်းများစွာအသိုံးံပ _ပီး ၁၉၉ဝပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှတဆင့် ဖော်ပြခဲ့သည့် ပြည်သူဏ္ဍလူထုဆနကြို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးအတွက် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ခေါ်ယူပေးရန် (အမှန်မှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားိံပကော်မတီရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ တွင်လည်းကောင်း။ ၁ှ၉၀ အရလည်းကောင်း။ နဝတ မှ ကတိံပ_ပီးဖြစ်သည်) အ}ကိမ်}ကိမ်တောင်းဆိုခဲ့သည်၊ (၁၀) နှစ် နီးပါးတိုင် စိတ်ရှည်လက်ရှည်သည်းခံလျက် တောင်းဆိုှုမရသည့်အဆုံးတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ခေါ်ယူရေးသည်နအဖ အတွက်သာ တာဝန်ရှိသည်မဟုတ်။ အရွေးချယ်ခံ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များတွင်ပါ အဓိကတာဝန်ရှိသည်ဟု ယူဆလျက်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ခေါ်ယူရေးရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီ ကို ဖွဲဏ္ဍစည်းခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်၊
(က) ပြည်သူလူထုက လ$တ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအား ‚င်းတိုဏ္ဍနှင့်‚င်းတိုဏ္ဍ.တိုင်းပြည်အကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးရန် ကိုယ်စားလှယ်လ$ဲအပ်ထားသည့် တာဝန်များကို လျစ်လျူရ+ှုမထားနိုင်သည့် အားလျော်စွာအတိုင်းအတာတခုအထိ စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်သမဋ ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊ (ခ ) ပြည်သူ့လွှတ်တော်ပေါ်ပေါက်လာလျင် ဒီမိုကရေစီရေးထွန်းကားလာ_ပီး ယင်းနှင့်အတူ လူဏ္ဍအခွင့်အရေးများ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန်၊ (ဂ ) နိုင်ငံတွင်း ပြည်သူလူထုခံစားဿကံတွေဏ္ဍနေရသော နိုင်ငံရေး။ စီးပွားရေး။ လူမ+ရေး။ ကျန်းမာရေး။ ပညာရေးအစရှိသည့် အထွေထွေအကျပ်အတည်းများကို အာ%ာပိုင်တိုဏ္ဍကျင့်သုံးနေသည့် နိုင်ငံရေးအင်အားစုများအပေါ်ဖိအားပေးအကျပ်ကိုင်။ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းသည့်နည်းများဖြင့် အကျပ်အတည်းများကို အသေအချာမဖြေရှင်းနိုင် သည်ေ-ကာင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီအနေဖြင့် တတ်အားသရွေဏ္ဍ ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန်ဟူသော ရည်ရွယ်ချက် (၃) ရပ်ဖြင့် ဖွဲဏ္ဍစည်းသည်၊
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားိံပကော်မတီဝင်များကို အောက်ဖော်ပြပါ ပုဂြိုဟ် (၁၀) ဦးဖြင့် ဖွဲဏ္ဍစည်းထားပါသည်၊ ဦးအောင်ရေ$ ဥက္ကဋ္ဌ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲဏ္ဍချုပ် ရန်ကုန်တိုင်း။ မရမ်းကုန်းမြိုဏ္ဍနယ် မဲဆနနြယ်အမှတ် (၁) ပြည်သူဏ္ဍလ$တ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁၉၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ(၁၉)ရက်နေဏ္ဍတွင်မွေးဖွားသည်၊ ရန်ကုန်က့သိုလ်မှ ၁၉၄ဝခုနှစ်တွင်တွင် ဝိဇ…ာဘွဲဏ္ဍရခဲ့ သည်၊ ၁၉၄၂ ခုနှစ်မှ ၁၉၄၅ ခုနှစ်အထိ ဗမာ့လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (ြူဗ) ဗမာ့ကွာကွယ်ရေးတပ်မတော် (ြီဗ) ဗမာ့မျိုးချစ်တပ်မတော် (ဏငြ်္) တိုဏ္ဍတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်၊ ၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင် တောင်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး အဖြစ်အမှုဏ္ဍထမ်းဆောင်နေစဉ် အလုပ်မှထုတ်ပယ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်၊ ၁၉၆၁ခုနှစ်မှ ၁၉၇၅ခုနှစ်အတွင်းသံအမတ်ºကီးအဖြစ်ºသစတေးလျ။ အီဂျစ်။ ပြင်သစ်။ စပိန်နှင့် နယူးဇီလန် တိုဏ္ဍတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုºကည်နှင့် ဦးတင်ဦးတိုဏ္ဍအဖမ်းခံနေရစဉ်အတွင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲဏ္ဍချုပ် ဥက့ဌအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သည်၊ ဦး
ပျူ• မြန်မာနိုင်ငံ မင်းဆက်များ•မွန်မင်းဆက်•ပုဂံခေတ်•တောင်ငူခေတ်• အင်းဝခေတ်•ညောင်ရမ်းခေတ်• ကုန်းဘောင်ခေတ်• အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ စစ်ပွဲများ • ကိုလိုနီခေတ်•ဂျပန်ခေတ်•မြန်မာ့ ဆိုရှယ်လစ်• န.ဝ.တ ခေတ်
ခါကာဘိုရာဇီ•ပုပ္ပါးတောင်• အင်းတော်ကြီးကန်•အင်းလေးကန်•ဧရာဝတီမြစ်•ချင်းတွင်းမြစ်• သံလွင်မြစ်•စစ်တောင်းမြစ်•မြစ်ဝကျွန်းပေါ်
နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီ• သမ္မတ•နိုင်ငံရေးပါတီများ (ဗ.က.ပ•NLD • တ.စ.ည•SNLD)•ရွေးကောက်ပွဲ•နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေး•တပ်မတော်
ကျန်းမာရေး • စက်မှု• ဘဏ္ဍာရေး • နေရာချထားရေး • ဆောက်လုပ်ရေး• ဆက်သွယ်ရေး • မွေးမြူရေး• သစ်တော• လျှပ်စစ်စွမ်းအား • ပြည်ထဲရေး • ပညာရေး • စွမ်းအင် • ရထား • ယဉ်ကျေးမှု • နိုင်ငံခြားရေး • သိပ္ပံ • သာသနာရေး • သတ္တုတွင်း • သမဝါယမ • ဟိုတယ် • အားကစား • အလုပ်သမား • ပြန်ကြားရေး • ကာကွယ်ရေး • စီးပွား/ကူးသန်း• လယ်/ဆည် • သမ္မတရုံး • စီမံ/စီးပွား • ပို့ဆောင်ရေး • နယ်စပ် • တိုင်းရင်းသား
မြန်မာ ဘာသာ•အစားအစာ• ရုံးပိတ်ရက်များ•ဆယ့်နှစ်လရာသီပွဲတော်
ပန်းဆယ်မျိုး • ရုပ်ရှင် • စာပေ • ဂီတ
ဗုဒ္ဓဘာသာ•ခရစ်ယာန်ဘာသာ• နိုင်ငံသား• ဆက်သွယ်ရေး•လူအခွင့်အရေး• သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး• မြန်မာ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့•ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်း
ဦးသန့် အရေးအခင်း •ဟယ်ရီတန်အရေးအခင်း •ဆဲဗင်းဂျူလိုင် ကျောင်းသား အရေးတော်ပုံ • ၈၈၈၈ အရေးအခင်း (ရှစ်လေးလုံး) •ဒီပဲယင်း အရေးအခင်း • ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး • နာဂစ် • ၂၀၁၂ ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခ
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပြည်သူ့လွှတ်တော်_ကိုယ်စားပြုကော်မတီ&oldid=421972" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၈၊ ၁၆:၀၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။